China Sarudzai zvakarurama yemitambo zvokudya; Usatambise migumisiro wako muviri! Mugadziri uye mutengesi | Bracefactory
Upper richiripo chibooreso
Lower richiripo chibooreso
kwakavharwa nenyama MUTSIGIRI
kwakavharwa nenyama gokora
kwakavharwa nenyama chiningoningo
kwakavharwa nenyama ibvi
kwakavharwa nenyama neketani
Metiresi & pamakusheni
SILICONE RETSOKA KUCHENGETA
INSOLES & Mapedhi
Sarudzai zvakarurama yemitambo zvokudya; Usatambise migumisiro wako muviri!
Nutrition zvokuwedzera vasati uye pashure muviri sezvo zvakakosha sezvo muviri pacharo. Kana usingade kushandisa mapuroteni upfu sezvo chete muviri chinamatidzwa, chii zvokudya zvinogona kutibatsira kuvandudza utano kuita panguva yechiitwa uye kudzorera simba mumuviri pashure muviri?
Australian yezvokudya Zoe Bingley-Pullin akati makabhohaidhiretsi ndiyo yakanakisisa kunobva simba zvokuwedzera pamberi muviri, uye dzichangobva kusvinwa muto kana wose-gorosi tika zvakare sarudzo yakanaka. Mushure muviri, kudya mudzi muriwo zvakadai makarotsi uye zvinozipa matapiri REGAI kubatsira kudzorera simba.
Australian yezvokudya Zoe Bentley-Pullin akati kusarudza zvokudya kunoenderana mhando muviri. Kana uri kuenda yokurovedza muviri, zvakakodzera kudya chinhu pamberi. In Blog post, Zoe akati kuti makabhohaidhiretsi ndiyo yakanakisisa kunobva simba zvokuwedzera pamberi muviri, kupa anodiwa simba kuti muviri.
Mumwe kana miviri zvidimbu zvibereko, kota kapu yakavhenganiswa muchero yakaoma kana mukombe dzichangobva-batwa muchero & miriwo muto kunogona kubatsira muzadze simba. Uyezve, kana uchironga kuita mukuru-simba mutambo akadai Weightlifting, mumwe kana miviri zvidimbu rose-zviyo tika, mupunga makeke zvinenge zvakazara Nut ruomba kana the ricotta kunogona kubatsira vawane kugwinya nani.
Saizvozvowo, zvakanaka zvokudya pashure muviri ndiwo musimboti unodzosa. Nyanzvi dzinoti maminitsi 30-60 mushure muviri ndiyo nguva yakanakisisa muzadze simba. Zoe akati kuti pashure muviri, zvakakodzera kuti kudya zvokudya vapfumi makabhohaidhiretsi uye mapuroteni.
Kana usina nguva yakakwana kubika, vamwe anokurumidza nezvikafu zvishoma kunogona kuva nesarudzo yakanaka, akadai nati bota mbariro, michero uye miriwo chinozunungusa kana mukuru-mapuroteni yogati zvakasiyana michero yakaomeswa. Uyezve, makarotsi, chinonhuwira mbatatisi nevamwe mudzi muriwo ndinoiitawo hummus kana the ricotta, kana yakabikwa zai zvishoma tika kana mupunga makeke anogona zvimwechetezvo.
Wedzera: F8, Bldg 1 Indonesia Road, Jiading 201805, Shanghai
Mabatirwo sprained neketani majoini?
Sarudzai zvakarurama yemitambo zvokudya; regai wakange ...
Ko shure kunofanira pashure neketani Joint kuminyuka?
Four Key Pfungwa kungofamba Nyore pasina ...
gokora Sungira, kwakavharwa nenyama Knee Sleeve, lumbar shure rutsigiro, neketani chibooreso, Sport Knee chibooreso , Compression neketani chibooreso,